အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(တီးတိန်) | DTVET
ဒေသအတွင်း အခြေခံပညာအလယ်တန်းအောင်မြင်ပြီးသည့် လူငယ်လူရွယ်များကို အခြေခံ ပညာအထက်တန်းအဆင့်မှာပင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနိုင်သည့် နည်းပညာဘာသာရပ်များ လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးနိုင်ရန်နှင့် ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်သည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(တီးတိန်)၏ ဖုန်းနံပါတ် -၀၉၄၇၃၁၀၈ ၊၀၇၀၅၀၆၀၅ ၊ အီးမေးလ် gthsttn@dtve.org များဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ယခုကျောင်းအုပ်ကြီး- ဦးဗိုလ်ဗိုလ် M.E(Mech)၊ဒု-ညွှန်ကြားရေးမှူး
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(တီးတိန်)တွင် (၅. ၁၁. ၂၀၀၈ )ရက်နေ့ မှ ( ၈. ၈. ၂၀၁၀)ရက်နေ့ထိ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း (M.E.EC)၊ (၉. ၈. ၂၀၁၀) ရက်နေ့မှ(၂၀. ၁. ၂၀၁၂) ရက်နေ့ထိ ဦးကျော်ကျော်ဦး (M.E Mech)နှင့်(၂၁ .၁. ၂၀၁၂) ရက်နေ့မှ ယနေ့အထိ ဦးထန်ကိမ်းခိုင် (M.E.PT) များက ကျောင်းအုပ်ကြီးများအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
စဥ် ပညာသင်နှစ် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်း ကျောင်းအောင်မြင်သူပေါင်း (ရိုးရိုးအောင်) အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း အောင်ြမင်သူပေါင်း (အထူးအောင်)
၁ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၁၁ ၁၂
၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၆ ၂
၃ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၅ ၄
၄ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၉ ၃
စုစုပေါင်း ၆၁ ၂၁
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(တီးတိန်)သည် ပထဝီအနေထားအရ မြောက်လတ္တီတွဒ် ၂ ဒီဂရီ နှင့် ၂၃ ဒီဂရီ ၃၀မိနစ်ကြား၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၅ ဒီဂရီ ၁၅မိနစ်နှင့် ၉၄ ဒီဂရီ၁၅ မိနစ်ကြား၊ တီးတိန်မြို့မှ တွန်းဇန်မြို့သွားကားလမ်းဘေး၊ တီးတိန်မြို့၏ မြောက်ဘက် သုံးမိုင်အကွာ တွင်တည်ရှိ ပါသည်။အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် (၁၇.၅)ဧကခန့် ကျယ်ဝန်းပါသည်။ထွမ်းဝုမ်ဂေါက်ကွင်း၏ အရှေ့ဖက် (၅)ဖာလုံအကွာတွင်တည်ရှိပါသည်။
(၂)နှစ်သင်တန်းတွင် ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ပါက AGTI ပထမနှစ်သင်တန်းသို့ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံများ၏ ဝင်ခွင့်ရွေးချယ်ရေးမူအတိုင်း လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ဒုတိယနှစ် သင်တန်းကို အောင်မြင်သည်ဖြစ်စေ၊ကျရှုံးသည်ဖြစ်စေ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကို ဖြေဆိုလိုပါက ပြင်ပဖြေအဖြစ် ဖြေဆိုခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(တီးတိန်)မှ ထူးချွန်စွာအောင်မြင်သော ကျောင်းသား /သူများအား TU ကျောင်းများသို့ ဆက်လက်သင်ကြားခွင့်၊ ရိုးရိုးအောင်မြင်သော ကျောင်းသား /ကျောင်းသူ များအား GTI ကျောင်းများသို့ဆက်လက်သင်ကြားခွင့်နှင့် GTHS အောင်လက်မှတ်ရရှိပြီး ပါကဌာနဆိုင်ရာများ ၊ အလုပ်ရုံများနှင့် ၊ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများတွင် လိုအပ်လျက်ရှိသော ကျွမ်းကျင် လုပ်သားအဖြစ် ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Scholarship ဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းအားဖြင့် သတ်မှတ်အရည်အချင်းမှီသူများအား ဝန်ကြီးဌာ ၊ ဦးစီးဌာနမှ အခါအားလျော်စွာခေါ်ယူထားသော Scholarship များကို လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။